Hitsy toraka : satria ve boaikely… (NewsMada) | AEMW
Hitsy toraka : satria ve boaikely… (NewsMada)
Nanamaloka ny fandresen’ny Makis de Madagascar «junior», teo amin’ny Can 1B natao tetsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina, omaly ny tsy fahafenoan’ny “gradin” sy ny “tribune”. Tsy araka ny nantenaina mantsy ny fahavitrihan’ny mpijery fa somary vitsy ihany, raha oharina amin’ny fitiavan’ny Malagasy ity taranja ity.
Raha ny fandrenesana ny fandresena voalohany azo teo amin’ny lalao mandroso ny alakamisy lasa teo, tokony ho feno hipoka ny kianja saingy nifanohitra tamin’izany no hita. Asa na noho ny haratsian’ny andro no nahatonga izany na ny fiheverana fa efa nandresy ny Makis, ka tsy dia ilaina intsony ny mijery ilay fihaonana.
Teo koa nefa ny filazan’ny sasany fa tsy dia maharototra loatra ny mpitia rugby ny lalaon’ny sokajy zandriny, raha mitaha amin’ny fihaonan’ny zokiny «sénior». Tsy tokony hijerena ny maha boaikely sy zokiny azy nefa ny lalao iraisam-pirenena fa tohanana foana rehefa ekipam-pirenena. Ilain’ny mpilalao ary tena hery lehibe ho azy mantsy ny fanohanana sy ny fankaherezana avy amin’ny mpijery.
← Fihaonambe Ticad fahenina atsy Nairobi : hanampy ara-bola sy amin’ny fotodrafitrasa ny Japoney (NewsMada)
Rugby – «Can 1B Junior 2016» : tompondakan’i Afrika ny Makis de Madagascar (NewsMada) →